トップページ ＞ 言語 ＞ ショナ語 ＞ お金を借りる際の一般窓口と女性窓口の違い
Nguva ichangopfuura, vatengi vave kuwedzera mari pamusoro caching pfungwa kunyorerana vakadzi-chete, akadana mukurumbira wakanaka.
Ichi hwindo kuti Kazhinji dziripo, une chii musiyano akanga ati.
vakadzi vanoda kushandisa kuti ramangwana caching Ndapota kureva.
ari chepfungwa mukuru pfungwa kunyorerana nevakadzi-chete hwindo?
kare kare kuti Mutengi mari, sezvo akadana Sarah goridhe, ndizvo kukwereta mari yokutanga yakanga mifananidzo simba, zvakadai murume. Zvisinei,
, kuti imi muri pfupi mari kunyange panyaya vakadzi kunowanzoitika.
Saka, ndiko chete pfungwa kunyorerana akazviratidza zvadzidzwa kuitira kuti unogona kunzwa wakasununguka kushandisa vakadzi. Pane musiyano zvishomanana mumwe
nounyanzvi, akasiyana kazhinji pfungwa, seanotevera.
pakuva wokutanga anosanganisira opareta kuita kugamuchirwa uye kubvunza ndechokuti vakadzi vose.
Ndiyo pfungwa kurwisa kuti mutengi mari kubudikidza hadzi vanoshandisa, zvinonzi kunge akatorwa kuitira kubvisa kunyange zvishoma.
mupikisi inoti chete-pabonde Kotomori, anogona nokutendeseka kubvunza tsamwa manzwiro, unogona kwakatangazve kuzorora kunyange foni zvengarava, zvakadai zvaunotaura kuti zvikomborero zvakawanda zvomudzimu ndege.
Uyewo, mune imwe neimwe Mutengi mari, izvozvo kunoratidzwa vakadzi mapikicha uye mifananidzo inogutsa kunze mberi.
Ladies chikwereti, vemba-ushamwari, mutsara chiratidzo akadai, ane zvakawanda kushanda kuti zviri nyore kuti vakadaro vakanyatsoshongedzwa.
vanhu hazvina kushandisa saka kure uchigonawo foni kunzwa kurwisa.
vakadzi-chete hwindo, kuitwa hadzi opareta uyewo, akadai okuverengwa nokusimbisa kuti kubasa kana kumba. Achitaura
nevatengi mari, runhare kureva kubasa asingadi vanhu vashoma kuti mutsipa.
Zvisinei, kana foni kubva mukadzi, uyewo kuva kashoma kuti kunzi kubva nevatengi mari.
pasina chero imwe kufunganya, zvichava iripo nevatengi mari.
chimbadzo kunowanikwa vakadzi
Chimbadzo, inosidzikwa kuva yakaderera muurongwa nokuti
vakadzi mumwe zvinhu.
izvi, hazvina kuwedzera zvikuru kwemari kunyange kana kushanda vakadzi, panzvimbo yokutanga miniti mukadzi asingafukidzwi vakakwereta mari guru, avo vari kuongorora kuti mubereko prices waizonzwa kunodhura.
Chokwadi, kana kusina zvachose mari pachayo, nekuti izvozvo kukwereta mari kuvimba mari yacho naye, kudzokorora kuti kunyange kuva yakasimba.
Kutaura zvazviri, kushandisa chikwereti pedyo vemba, uye munhu akaita chikumbiro, uye ndinoiitawo mari yacho naye, zvakatangwa nemutemo uye nemari yaunganidzwa kugovera chimwe-rechitatu nokukwereta mari.
kana, ngationei kubva kukarukureta pachine kana yakawanda mari inodiwa kuita kushanda.
ona / kana href = "http://xn--t8ja5qbdc8bd3083eea5016pfa.com/cooltaiwan/index.html"> mari yaainge mubhengi pane vakawanda chimbadzo
sei kushandisa uyewo musiyano nenguva nokukwereta mari mutengi mari < / H2> kuna
vakadzi-chete chikwereti, pasina kushandisa unmanned chibvumirano michina, kazhinji zvose mamiriro ezvinhu zvakakwana pokushandisa Internet akagadzwa.
Izvi, zvikuru uye epamba vasina vana vaduku kubva pamba kazhinji, nezvavanofunga vakananga nawo nyore kunzwa kurwisa vakadzi kuenda zvakananga hofisi.
mushandisi, pasina kunetseka noruzhinji, nokuti zvinoita sununguka kusaina kumusoro, rava nevakawanda chikonzero.
Summary < / H2> caching muna
vakadzi-chete hwindo, nokuti hadzi mudonzvo vakazvitsaurira tsamba, makarwe Kunyange kana iwe asaine kukwira kokutanga kuzviongorora kuti. Akadai
kufunganya manzwiro uye mibvunzo uyewo achagona kubvunza pakarepo.
Uyezve, sezvo vabvunza kunzvimbo basa kuitwa mukadzi, hapana kufunganya pamusoro Bale kubasa iri hama.
uyewo mubasa pamusoro, akadai pasi mubereko prices weboka vakazvitsaurira vari kugadzirira, pane nzira yokushandisa rechikadzi.
Zvisinei, kuongororwa, nokuti zvinoitwa saizvozvo zvisinei munhurume, Edza kushandisa apo nokufunga kwemari divi uye nokuripira okufunga.
Uyezve, kushanda mutengi mari ine kuwedzera nyaya dzinogona kuva kunyange kubva Internet. Kana
ichi, pamusoro here kufungira sokuti vanhu vari munharaunda, zviri nyore kunogona kubata pasina kuenda kunzwa vanowanzotevedzera mahofisi uye unmanned chibvumirano muchina nemishonga.
kana, kana kunetseka kamwe mari, uyewo vaizova kusarudza mari Kumutsa mu nzira idzi. Caching muna
kana, kana kunetseka kamwe mari, uyewo vaizova kusarudza mari Kumutsa mu nzira idzi.